Spectre စျေး - အွန်လိုင်း XSPEC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Spectre (XSPEC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Spectre (XSPEC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Spectre ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $2 080 586.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Spectre တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Spectre များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
SpectreXSPEC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.129SpectreXSPEC သို့ ယူရိုEUR€0.109SpectreXSPEC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0985SpectreXSPEC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.118SpectreXSPEC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.16SpectreXSPEC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.812SpectreXSPEC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč2.87SpectreXSPEC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.482SpectreXSPEC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.172SpectreXSPEC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.179SpectreXSPEC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$2.9SpectreXSPEC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1SpectreXSPEC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.69SpectreXSPEC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹9.7SpectreXSPEC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.21.83SpectreXSPEC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.177SpectreXSPEC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.194SpectreXSPEC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿4.02SpectreXSPEC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.9SpectreXSPEC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥13.67SpectreXSPEC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩153.29SpectreXSPEC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦49.06SpectreXSPEC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽9.49SpectreXSPEC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴3.59
SpectreXSPEC သို့ BitcoinBTC0.00001 SpectreXSPEC သို့ EthereumETH0.000325 SpectreXSPEC သို့ LitecoinLTC0.00216 SpectreXSPEC သို့ DigitalCashDASH0.00124 SpectreXSPEC သို့ MoneroXMR0.00137 SpectreXSPEC သို့ NxtNXT9.19 SpectreXSPEC သို့ Ethereum ClassicETC0.018 SpectreXSPEC သို့ DogecoinDOGE35.99 SpectreXSPEC သို့ ZCashZEC0.00133 SpectreXSPEC သို့ BitsharesBTS4.97 SpectreXSPEC သို့ DigiByteDGB4.66 SpectreXSPEC သို့ RippleXRP0.422 SpectreXSPEC သို့ BitcoinDarkBTCD0.00435 SpectreXSPEC သို့ PeerCoinPPC0.431 SpectreXSPEC သို့ CraigsCoinCRAIG57.54 SpectreXSPEC သို့ BitstakeXBS5.39 SpectreXSPEC သို့ PayCoinXPY2.2 SpectreXSPEC သို့ ProsperCoinPRC15.84 SpectreXSPEC သို့ YbCoinYBC0.00007 SpectreXSPEC သို့ DarkKushDANK40.49 SpectreXSPEC သို့ GiveCoinGIVE273.32 SpectreXSPEC သို့ KoboCoinKOBO28.25 SpectreXSPEC သို့ DarkTokenDT0.119 SpectreXSPEC သို့ CETUS CoinCETI364.45